नेपाल टेलिकमको फोरजीमा के छ... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
नेपाल टेलिकमको फोरजीमा के छ नयाँ सुविधा?
नेपाल टेलिकमले देशका ५९ सहरमा फोरजी सेवा सुरु गरेको छ। आउने फागुनसम्म देशभर सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको टेलिकमले यो सेवा एड्भान्स्ड भएको बताएको छ।
टेलिकमो फोरजीमा के छ नयाँ सुविधा जुन यसअघि थिएन?
नेपाल टेलिकमले नेपालमै पहिलोपटक भ्वाइस ओभर एलिटिई सुविधा ल्याएको छ। विस्तारित फोरजीमा यो सुविधा पनि भएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले जानकारी दिए।
करिब २० अर्ब खर्चिएर विस्तार गर्न लागेको यो आयोजनाबाट नयाँ सेवा तथा सुविधा ग्राहकले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारीले बताए।
‘रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट जाँदा आवाज रोकिने, काटिने र ढिला कनेक्सन हुने हुन्छ तर यसमा कि जाँदैन गएपछि रेकर्ड गरेर पठाएको जस्तो आवाज जान्छ’ अधिकारीले भने।
कहाँ सुरु भयो टेलिकमको फोरजी सेवा?
१ चन्द्रगढी २विर्तामोड ३ दमक ४ धरान ५ इटहरी ६ इनरुवा ७ विराटनगर ८ भारदह ९ धनकुटा १० जनकपुर ११ जलेश्वर १२ जलेश्वर १३ मलंगवा १४ गौर वीरगञ्ज १५ कलैया १६ सिमरा १७ बेसीशहर १८मन्थली १९ सिन्धुपाल्चोक २० चरीकोट २१ हेटौंडा २२ धुलिखेल २३ बनेपा २४ पनौती २५विदुर २६ धुन्चे २७ धादिङ २८ सौराहा २९ टाँडी ३० भरतपुर ३१ वर्दघाट ३२ परासी ३३ देवदह ३४ सुनवल ३५ मुर्गिया ३६ बुटवल ३७ भैरहवा ३८ लुम्बिनी ३९ तानसेन ४० मंगलापुर ४१ बागलुङ ४२ कुस्मा ४३ बेनी ४४ तुलसीपुर ४५ घोराही ४६ लमही ४७ कोहलपुर ४८ नेपालगञ्ज ४९ गुलरिया ५० सुर्खेत ५१ लम्की ५२ सुख्खड ५३ मसुरिया ५४ चौमाला ५५ टिकापुर ५६ धनगढी ५७ अत्तरिया ५८ झलारीपिप्लाडी ५९ भीमदत्तनगर
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज १६, २०७६, ०८:१८:००